Guddoomiyaha Guddiga Dastuurka ee Hirshabeelle oo lagu wareejiyay nuqulkii labaad ee dib-u-eegista Dastuurka – Kalfadhi
Guddiyada Dastuurka ee labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maamulka Hirshabeelle ku wareejiyay nuqulkii labaad ee Dastuurka kaas oo dib-u-eegista lagu sameeyay.
Munaasabad kooban oo ka dhacay magaalada Jowhar ayaa loogu wareejiyay Guddoomiyaha Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Hirshabeelle.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in marka ay falanqeeyaan nuqulka labaad kaddib ay aragtidooda usoo gudbin doonaan guddiga federaalka. Guddiga ayaa bishii hore wadday kulamo ay la qaadanayaan dowlad-goolleedyada dalka, kaas oo looga hadlayay arrimaha ku saabsan dhammeystirka Dastuurka.
Dib-u-eegista dastuurka ayaa la filayaa in bisha June ee sannadkan lasoo gaba-gabeeyo, balse lama ogga haddii kulamada baarlamaanka ay dib u furmi doonaan madaama xanuunka COVID-19 awgeed loo baajiyay kulamadda labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddiga Kheyraadka ee Golaha Aqalka sare oo ka hor-yimid xilliga la bixinayo shatiyada baloogyada shidaalka